फ्लू कति लामो हुन्छ? | एकलकेयर - स्वास्थ्य शिक्षा | सेप्टेम्बर 2021
कम्पनी, समाचार कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर कम्पनी भारी खेल स्वास्थ्य शिक्षा घरपालुवा जनावर स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार मनोरञ्जन चेकआउट औषधि बनाम मित्र औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा कम्पनी, चेकआउट समुदाय, कम्पनी कल्याण
मुख्य >> स्वास्थ्य शिक्षा >> फ्लू कति लामो हुन्छ?
जबकि फ्लु मौसम को मितिहरु प्रत्येक वर्ष फरक हुन्छ, यो अक्सर अक्टुबर मा शुरू हुन्छ र सामान्यतया मे सम्म रहन्छ। राम्रो समाचार फ्लू रोकथाम छ कि छ। तपाईं आफ्नो वार्षिक फ्लू शट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईंको हात स्वच्छता राख्नुहोस् कि कोरोनाभाइरस महामारी प्रबलित, र एक स्वस्थ जीवनशैली जारी राख्न। यद्यपि तपाईका उत्तम प्रयासहरूको बाबजुद पनि, त्यहाँ फ्लू हुने सम्भावना अझै छ। दुर्भाग्यवस, एकचोटि तपाइँले यो प्राप्त गर्नुभएपछि, त्यहाँ कुनै वैश्विक वा द्रुत उपचार छैन। भाइरसले यसको पाठ्यक्रम चलाउनुपर्दछ, र यसले राम्रो महसुस गर्न केही दिन लिन सक्दछ। हामी छलफल गर्नेछौं कसरी फ्लू लामो हुन्छ र यी pesky फ्लु लक्षणहरुबाट छिटो राहत खोज्ने तरिकाहरू।
सामान्यतया फ्लुबाट बाहिर हुन कति समय लाग्छ?
यो कम्तिमा एक देखि दुई हप्ता सम्म लिन सक्दछ फ्लूबाट पूर्ण पुनः प्राप्त गर्न, भन्यो निकेत सोनपाल , MD, NYC मा एक बोर्ड प्रमाणित इंटर्निस्ट।
ज्वरोको साथै फ्लूको अन्य लक्षणहरूको साथ, सामान्यतया कतै पनी to देखि सात दिन सम्म रहनेछ। यद्यपि यो पूर्ण रूपमा राम्रो महसुस गर्न लामो समय लिन सक्दछ। जबकि तपाईंको शरीर पहिले नै संक्रमण बाट लड्न सक्दछ, जबकि तपाईं अझै पनि दुई हप्ता सम्म १००% महसुस हुन सक्नुहुन्न, डा। Sonpal भन्छन्। तपाईको शरीर रिकभरीमा हुँदा दुर्बल र थाकेको महसुस गर्नु पूर्ण सामान्य छ।
फ्लू छ धेरै संक्रामक पहिलो तीन चार दिनको अवधिमा जब तपाइँ लक्षणहरू देखाउन सुरू गर्नुहुन्छ। यद्यपि केही व्यक्तिहरू फ्लूको संक्रमण हुन सक्दछन् किनकि उनीहरूले लक्षणहरू देखाउन सुरू गर्नु अघि नै फ्लु किन यत्तिको संक्रामक हुन सक्छ भनेर वर्णन गर्दै। धेरै व्यक्ति जो फ्लू भाइरस छ को लागी अरु लक्षणहरु को शुरू देखि पाँच देखि सात दिन पछि संक्रामक हुनेछ।
कति एडविल र टायलेनोल म एकसाथ लिन सक्छु
सम्बन्धित: के फ्लू एयरबोर्न छ?
अन्य रोगहरूको तुलनामा फ्लू कति लामो हुन्छ?
फ्लू भाइरस र पेट फ्लू एक समान चीजहरू छैनन्, न त उनीहरूको उस्तै रिकभरि समय छ। पेट फ्लू औसतमा एकदेखि दुई दिनसम्म रहन्छ, तर कहिलेकाँही यो १० दिनसम्म रहन सक्छ।
सामान्य चिसो, कहिलेकाँहि फ्लूको लागि गलत हुन, पनि फरक रिकभरी समय हुन्छ र दुईदेखि १० दिनसम्म टिक्न सक्छ।
इन्फ्लुएन्जा र COVID-19 का समान लक्षणहरू छन् र एक अर्काबाट भिन्न हुन गाह्रो हुन सक्छ। कोरोनाभाइरस, साधारण चिसो, र इन्फ्लूएन्जा बीचको भिन्नता छुट्याउने बारेमा बढि जान्नुहोस् यहाँ ।
फ्लू को अवस्था के हो?
इन्फ्लूएन्जा भाइरसको संपर्कमा भएपछि, संक्रमणका लक्षणहरू प्रदर्शन गर्न सुरू गर्न एक देखि चार दिन लाग्नेछ।
यी प्रारम्भिक लक्षणहरूमा प्रायः ज्वरो वा चिसो, टाउको दुख्ने, घाँटी दुख्ने, सुख्खा खाँसी, बहेको नाक, मांसपेशी दुख्ने, र थकान समावेश छ, डा। सोनपाल बताउँदछन्। फ्लूको शुरुवात तब हुन्छ जब लक्षणहरू उनीहरूको गम्भीर अवस्थामा हुन्छन्, र तपाईंलाई थकान, कमजोरी, र उच्च ज्वरोको बारेमा दुई वा तीन दिनको लागि ओछ्यानमा सीमित राखिन्छ।
तपाईको ज्वरो यिनीहरूको पहिलो दिन पछि भाँच्नुपर्दछ, र लक्षणहरू बिस्तारै अर्को तीन देखि सात दिनहरूमा हल हुनेछ। सात दिन पछि र एकचोटि तपाईंको सबै लक्षणहरू समाधान भएपछि फ्लू सकियो। तपाईं अझै कमजोर वा थकित महसुस गर्न सक्नुहुनेछ, तर अन्यथा, लक्षण मुक्त। यस समयमा, तपाईं सुरक्षित रूपमा काम वा स्कूलमा जान सक्नुहुन्छ। यो पूर्ण रूपमा सामान्य छ किनकि तपाईको शरीरले पुन: प्राप्ति गर्न अतिरिक्त ऊर्जा प्रयोग गर्यो।
यी संख्याहरूमा केहि अपवादहरू छन्। प्रायः स्वस्थ व्यक्तिहरूको लागि, सात दिन तिनीहरूको सबै शरीरको लक्षण रहित हुनु आवश्यक छ र अब संक्रामक हुँदैन। जहाँसम्म, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली भएका व्यक्तिहरू वा साना बच्चाहरू संक्रामक हुन सक्छन् र लक्षणहरू लामो समय सम्म प्रदर्शन गर्न सक्दछन् किनकि तिनीहरूको शरीरलाई संक्रमणबाट बच्न अधिक समय चाहिन्छ।
द्रुत फ्लू राहत
यदि तपाईलाई फ्लू छ भने तपाईका लक्षणहरूबाट छिटो छुटकारा पाउन सहयोगको लागि उपचार र घरेलु उपचारहरू छन्।
एंटीवायरल औषधि : जो गम्भीर लक्षणहरू अनुभव गर्छन् वा कमजोर प्रतिरोधात्मक क्षमता प्रणालीको लागि, तपाइँको डाक्टरले एन्टिवाइरल औषधि दिन सक्नुहुन्छ। यस औषधिले रिकभरीमा मद्दत गर्दछ र लक्षणहरूको गम्भीरतालाई कम गर्दछ। फ्लूको लागि निर्धारित सबैभन्दा लोकप्रिय एन्टिवाइरल औषधि मध्ये एक हो तामीफ्लु ( oseltamivir फॉस्फेट )।
तरल पदार्थ र आराम : फ्लुको बिरूद्ध लड्न तपाईंलाई आवश्यक पर्ने दुई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चीजहरू हुन्: प्रशस्त तरल पदार्थहरू पिउनु र प्रशस्त आराम पाउनु। हाइड्रेशन र आराम संक्रमणको विरूद्ध लड्न र पुन: प्राप्ति समयको गतिलाई मद्दत गर्न आवश्यक छ।
ओभर-द-काउन्टर दुखी रिलीभर : फ्लूका केहि लक्षणहरूलाई कम गर्न मद्दतको लागि, उदाहरणका लागि, ज्वरो र शरीर दुखाइ, काउन्टरको पीडा कम गर्ने प्रयोग गर्नुहोस्। एसिटामिनोफेन र आईबुप्रोफेन जस्ता दुखाइ कम गर्नेले केही राहत प्रदान गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ।
ओभर-द-काउन्टर डेन्जेन्जेन्ट : अक्सर फ्लूका लक्षणहरू रातमा खराब हुन्छन्। यसको एक कारण यो हो किनभने समतल झूट बोल्नाले घाँटीको पछाडि बलगम दौडन्छ, जसले गर्दा दुखाइ, जलन, र खोकीको कारण। धेरै पानी पिउँदा बलगम पातलो हुन सक्छ, तर डिकन्जेन्ट्स र / वा एन्टीहिस्टामाइन्सले पनि यो लक्षण कम गर्न मद्दत गर्दछ, जस्तै सामान्यतया Nyquil जस्ता केही मिश्रण उत्पादनहरूमा पाइन्छ।
यदि तपाईंले फ्लूलाई पहिलो स्थानमा हुनबाट रोक्नुभयो भने तपाईंलाई फ्लू राहतको आवश्यकता पर्दैन। एक मौसमी फ्लू शट फ्लु सुरु हुन अघि यो रोक्न एक स्मार्ट विकल्प हो। फ्लू खोपहरू सबैको लागि सिफारिस गरिन्छ र विशेष गरी ठूलो जोखिम समूहहरू जस्तै बुढा वयस्कहरू वा दीर्घकालीन रोगबाट ग्रस्तहरूका लागि उपयोगी हुन्छ। तपाईलाइ फ्लु सिजन सुरु हुनुभन्दा अघि हरेक वर्ष नयाँ चाहिन्छ, किनकि प्रत्येक वर्ष फ्लू भाइरसको तनाव परिवर्तन हुन्छ, यसको मतलब भ्याक्सिन भाइरससँग मिल्न प्रत्येक वर्ष परिवर्तन गर्नुपर्दछ। एउटा साधारण फ्लू भ्याक्सिन ब्रान्ड हो फ्लुजन चतुर्भुज र एक डाक्टरको कार्यालय वा सबैभन्दा ठूलो फार्मेसीमा दिन सकिन्छ। त्यहाँ खोपबाट साइड इफेक्टहरू हुन सक्छ, जस्तै टाउको दुख्ने वा इन्जेक्शन साइटमा दुखाइ, तर फ्लुको तुलनामा यो प्राय: साना हुन्छन्।
लगातार फ्लू लक्षणहरूको लागि जब डाक्टरलाई भेट्ने
फ्लू खतरनाक हुन सक्छ, अस्पतालमा भर्ना हुन वा कहिलेकाहिँ मृत्युसमेत हुन्छ। तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई कहिले भेट्ने भनेर जान्नु महत्त्वपूर्ण छ।
डा। सोनपालका अनुसार यो समय डाक्टरसँग परामर्श गर्ने समय हो, यदि तपाईंलाई तीन दिन भन्दा बढी ज्वरो आएको छ भने, त्यो पुग्छ १०3 ° F वा उच्च , वा गम्भीर टाउको दुखाइ, गलामा सूजन, एक असामान्य छाला रौं, मानसिक भ्रम, बान्ता, वा सामान्य लक्षणहरु बाहिर कुनै अन्य संगै छ।
उसले एक डाक्टरलाई सम्पर्क गर्न सल्लाह पनि दिन्छ यदि तपाईसँग लक्षणहरु एक हप्ता भन्दा लामो समय सम्म रह्यो भने। यसले एक अंतर्निहित अवस्थालाई संकेत गर्न सक्छ जुन तपाइँको रिकभरीमा बाधा पुर्‍याइरहेको छ। यो सम्भव छ कि तपाईले अनुभव गरिरहनु भएको छ फ्लू जटिलताहरु । जटिलताहरू कानूनी वा साइनस संक्रमण जस्ता सामान्य गौण संक्रमण हुन सक्छ। जहाँसम्म, त्यहाँ सम्भावित गम्भीर जटिलताहरू पनि छन् मुटुको सूजन जस्तै। गर्भवती महिला विकासकर्ता बच्चालाई जोखिम हुने भएकोले उनीहरूलाई फ्लू भएको छ भने तत्कालै उनीहरूको डाक्टरलाई पनि सम्पर्क गर्नुपर्छ।
अरूलाई फ्लूको प्रकोप रोक्न सहयोग गर्नु महत्वपूर्ण छ। यो केहि व्यक्तिको लागि गम्भीर स्वास्थ्य जोखिम हुन सक्छ। फ्लूको रोकथामका केहि तरिकाहरू हुन्:
फ्लू खोप लिनुहोस्
उचित हात स्वच्छता प्रयोग गर्नुहोस्
फ्लूको मौसममा सतहहरूको कीटाणुरहित गर्नुहोस्
तपाईंको खोक्रो प्रयोग गर्नुहोस् तपाईंको नाक र मुख ढाक्नको लागि जब तपाईं खान्की वा छींक गर्नुहुन्छ
लक्षणहरू सुरु भएपछि घरमा बस्नुहोस्
महिलाहरु को लागी शीर्ष5सर्वश्रेष्ठ दौडने जूता
त्यहाँ toenail कवक को लागी एक उपचार छ
बीमा संग इन्सुलिन कति खर्च हुन्छ?
म कब्जियत बाट कसरी छुटकारा पाउन सक्छु?